Aka ber tsiabaa ma Jesus ewu no, ɔkãa dɛ: “Na Ahenman ho asɛmpa yi, wɔbɛkã wɔ wiadze nyina dze edzi amanaman nyina dase; na nkyii ewiei no bɛba.” (Matthew 24:14) Naaso wɔbɛyɛ dɛn mbɔ ayɛ dɛm asɛmpakã edwuma yi wɔ wiadze nyina? Gyedɛ wodzi nhwɛdo a Jesus yɛe aber a nna ɔwɔ asaase do no ekyir.​—Luke 8:1.
Yɛbɔ mbɔdzen dɛ yɛbɛkã asɛmpa no akyerɛ nkorɔfo wɔ hɔn efie mu. Jesus tsetsee n’esuafo no ma wɔkãa asɛmpa no wɔ efiefi. (Matthew 10:11-13; Ndwuma 5:42; 20:20) Wɔkyerɛɛ afeha a odzi kan asɛmpakafo no nsaasesin anaa mbea pɔtsẽe bi a nna ɔsɛ dɛ wɔkã asɛmpa no. (Matthew 10:5, 6) Ndɛ so, yɛayɛ nhyehyɛɛ pa a yɛdze yɛ hɛn asɛmpakã edwuma no, na wɔama asafo biara asaasesin a wɔyɛ mu edwuma. Iyi boa hɛn ma yɛkã asɛmpa no kyerɛ nyimpa dodowara dze dzi ahyɛdze a Jesus dze mae dɛ “yɛnkã nkyerɛ ɔman no, na yendzi dase” no do.​—Ndwuma 10:42.
Yɛbɔ mbɔdzen dɛ yɛbɛkã asɛmpa no akyerɛ nkorɔfo wɔ beebiara a yebohu hɔn no. Jesus san yɛɛ nhwɛdo maa hɛn dze nam asɛmpa no a ɔkãa kyerɛɛ nkorɔfo wɔ baguamu no, tse dɛ mpoano, anaa amansuon bura ho. (Mark 4:1; John 4:5-15) Hɛn so, yɛnye nkorɔfo bɔ Bible mu nkɔmbɔ wɔ beebiara a yebotum​—kwan ho, ndwuma ahorow mu, beebi a nyimpa gye hɔn ahom, anaa telefon do. Sɛ yenya hokwan a ɔfata so a, yedzi hɛn efipamfo, edwumamufo, skuulfo nye ebusuafo dase. Dɛm mbɔdzembɔ ahorow yi ama nyimpa ɔpepem pii a wɔwɔ wiadze mfɛndzanan no atse “nkwagye” ho asɛmpa no.​—Ndwom 96:2.
Woananom na ehwɛ a ibotum akã Nyankopɔn Ahendzi no ho asɛmpa nye dza asɛmpa no bɛyɛ ama hɔn daakye no akyerɛ hɔn? Mma mmfa enyidado nkrasɛm yi nnhyɛ woho. Enye hɔn nkyɛ no ntsɛmara!
Ebɛn “asɛmpa” na ɔsɛ dɛ yɛkã no?
Jehovah Adasefo reyɛ dɛn esũasũa ɔkwan a Jesus faa do kãa asɛmpa no?
Ma wo Bible kyerɛkyerɛnyi nkyerɛ wo mbrɛ ibesi akã dza esũa efi Bible mu no akyerɛ ɔmanyifo bi a ennkɛhyɛ no ebufuw.